Tantara: Fahasahiranana tao An-tranon’i Davida - Tranonkala Ofisialin’ny Vavolombelon’i Jehovah
TAORIAN’NY nanombohan’i Davida nanapaka tao Jerosalema, i Jehovah dia nanome ho an’ny taﬁny fandresena maro tamin’ireo fahavalony. Nampanantena i Jehovah fa nanome ny tany Kanana ho an’ny Israelita. Ary noho ny fanampian’i Jehovah izao, dia lasan’izy ireo ny tany rehetra nampanantenaina azy.
Mpanjaka tsara i Davida. Tia an’i Jehovah izy. Koa ny voalohany amin’ireo zavatra nataony taorian’ny famaboana an’i Jerosalema dia ny ﬁtondrana ny ﬁaran’ny faneken’i Jehovah ho ao. Ary niriny ny hanorina tempoly iray mba hametrahana izany tao anatiny.
Naniry fatratra loatra an’i Batseba i Davida ka nampaka azy ho ao an-dapany. Lasa tany an’ady ny vadin’i Batseba. Nampiseho ﬁtiavana taminy i Davida, ary tatỳ aoriana dia hitan-dravehivavy fa hanan-janaka izy. Tena very hevitra i Davida ary nampitondra teny ho any amin’i Joaba mpitari-taﬁka, mba hametraka an’i Oria eny alohan’ny ady, ka amin’izay dia ho faty izy. Rehefa maty i Oria, dia nanambady an’i Batseba i Davida.
Voalohany dia maty ny zanakalahin’i Batseba. Avy eo i Amnona zanaka lahimatoan’i Davida dia naka an’i Tamara anabaviny irery ary nanao ﬁtiavana an-keriny taminy. Tezitra loatra i Absaloma zanakalahin’i Davida noho izany, hany ka novonoiny i Amnona. Tatỳ aoriana i Absaloma dia nahazo ny fankasitrahan’ny maro tamin’ny vahoaka ary nanao ny tenany ho mpanjaka. Farany, i Davida dia nandresy an’i Absaloma izay novonoina. Nahita zava-nanahirana maro be i Davida.